Nhau - Nderupi rudzi rwemishonga mapiritsi e benoxate
Rudzii rwemishonga mapiritsi e benoxate
Benorilate inozivikanwawo separacetamol, antipyretic, uye benzol. Chemical zita: 4- (acetamido) phenyl 2- (acetoxy) benzoic acid ester.
Unhu hwemapiritsi ebenoxate
Mahwendefa eBenoate mubatanidzwa we lipophilic unogadzirwa neaspirin uye paracetamol hydroxyl boka, iro rinotsiva mapoka makuru anokonzera chepfu uye nemhedzisiro mhedzisiro-mumapoka ehydroxyl uye carboxyl, uye inotarisa aspirin kuti ibvise zvakanyanya marwadzo. , Anti-kupisa simba uye yakasimba antipyretic mhedzisiro yeparacetamol. Inokunda kutadza kweaspirini uye aminopyrine yekukasika kudzikisa fivha. Iyo ine yakanaka mafuta solubility uye inowedzeredzwa hydrolyzed muropa kusiyanisa zvachose neaspirin uye paracetamol monomers. Metabolites, saka mhedzisiro yacho iri nyoro, iyo yekurapa maitiro iri nani, uye kuchinjika kune simba.
1.Kurumidza kuita, yakanaka kuputsa chiyero uye yakakwira bioavailability.
2. Chiitiko chekushushikana kwakashata ishoma. Sezvo ichi chigadzirwa chisingapinde muhydrolysis mudumbu remudumbu, chinokunda kutsamwa kweanowanzo antipyretic analgesics kune yemudumbu turakiti, uye haina-muropa uye inoenderana nekushandisa kwenguva refu.
3.Hauna zvainoita pamutsipa wepakati wekushisa kwemuviri. Icho chakanyanya kunaka uye chakachengeteka kana chikaiswa kune vacheche uye vana vadiki vane tembiricha yekumisikidza nzvimbo haisati yakura.
4. Hapana hwema husina kujairika, hunogona kutorwa kana kutsengwa; kwenguva refu-yakakwira-dhizaini yekushandisa, isina mhedzisiro padanho reropa, hematopoietic basa, chiropa chinoshanda, itsvo basa, immune immune. Naizvozvo, Nochisha mushonga wakanaka kumhuri.
Pharmacological mhedzisiro yemapiritsi e benoxate
Mushure mekudyiwa kwemuromo kwemapiritsi eBenoate, inoshandisa antipyretic athari nekudzivirira cyclooxygenase mukatikati yenheyo system uye kudzikisa kusanganisa kweprostaglandin (PG); ine analgesic athari nekudzivirira PG synthase mune yekunze matukisi; Kubudikidza nekudziviswa kwePG synthesis panguva yekuzvimba mhinduro, inoenderana yekurapa mhedzisiro inogadzirwa. ndokuti:
1. Antipyretic mhedzisiro: zvinobudirira inhibit the pathological excitement of the body tembiricha centre, kuderedza kupisa kupisa mumuviri; gadzira midziyo yeropa yeganda kuwedzera, ziya zvakanyanya, uye kumhanyisa kupisa kupisa (hapana zvazvinoita pane tembiricha yemuviri yakajairika).
2. Analgesic mhedzisiro: inhibit kuumbwa kweantigen-antibody, inokanganisa kuunganidzwa kwemitumbi yeantigen; ita zvakananga panzvimbo yekugamuchira, kudzivirira kuumbwa kwevanyaradzi vanorwadziwa (PG), uye kuve nemhedzisiro yekusunungura zvinhu zvinorwadza kana uchirwisa kukuvara kwenyama.
3. Anti-kupisa simba: inhibit kuumbwa kwemakemikari zvinhu zvakadai seprostaglandin, histamine, brady fetus, nezvimwe, uye kuramba kwavo kukurudzira; dzikamisa lysosomal membrane; kuderedza vascular permeability in inflamed tishu, kubvisa mvura; vane fibrinolytic Vandudza microcirculation.
Zviratidzo zveBenoate Mahwendefa
1. Iyo inoshandiswa pakurapa dzihwa, fivha, uye zvimwe zvirwere, uye ine yakakosha antipyretic mhedzisiro.
2. Wide siyana analgesic migumisiro. Mushonga wemukati, neurology, obstetrics uye gynecology, ENT, nezvimwe zvinoshandiswa pakurapa kwemusoro, zino, neuralgia, kuzvimba kwehuro uye kurwadziwa, kurwadziwa kwemhasuru, kurwadziwa kwekuenda kumwedzi, kurwadziwa kwepashure kwekurwadziwa, kurwadziwa kwekushungurudzika, nezvimwewo, kushanda mukati memaminitsi makumi maviri, Chiyero chinoshanda chiri pamusoro pe98%; kunyanya kurwadziwa kusingaperi.
3. Nekurapa kweacute uye chisingaperi rheumatoid arthritis, iyo inoshanda mwero ndeye 94.3% yekubatana kusuruvara, kumashure musuru kusuruvara, uye kubatana kusabatana.
4. Iyo ine anobatsira ekurapa mhedzisiro pane zvinoshungurudza kuzvimba uye hutachiona hutachiona hunokonzerwa nemamwe hutachiona uye hutachiona.
5. Uye zvakare, chigadzirwa ichi chinogona zvakare kushandiswa kudzivirira uye kubata cerebral thrombosis uye arterial thrombosis. Iyo ine inopesana nemhedzisiro pane platelet kuunganidzwa kunokonzerwa ne collagen uye adenosine diphosphate, uye inogona kudzikisira thrombosis.